Madaxda gobolka iyo saraakiisha ciidanka oo kormeeray xaafadaha magaalaga Galkacyo. – Radio Daljir
Nofeembar 21, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Nov 21 – Madaxda maamulka gobolka Mudug iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee ka hawlgala gobolka Mudug, ayaa maanta bilaabay kormeero la xiriira adkaynta ammaanka magaalada Galkacyo, kormeerkaasi oo ay ku tagayeen dhammaan degmooyinka iyo xaadafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo.
Mas?uuliyiinta oo meelaha qaar lug iskaga gudbayey, ayaa kulamo ku qabtay xarumaha laga maamulo 3-da degmo ee loo qaybiyey magaalada Gaalkacyo iyo waliba 13-ka xaafadood ee ay magaalada ka kooban tahay.
Kormeerka mas?uuliyiintaas ayaa ku saabsanaa adkaynta ammaanka magaalada Galkacyo, iyadoo xaafadkastana loo qorsheeyey in ay si gaar ah u illaalsato amnigeeda iyadoo gacan buuxda ka helaysa ciidamada ammaanka u xilsaaran.
Mas?uuliyiintu waxay dadka ay maanta kula kumeen xaafadaha kala gadisan ee magaalada Galkacyo u sheegeen in ay illaalsadaan ammaankooda kana tigtoonaadaan dadka caadaystay ka shaqaynta amni darrada, waxayna u soo jeediyeen dadka shacabka ahi in ay hubiyaan dadka ay gabaadka siinayaan ama ay guraha ka kiraysanayaan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo isagu horkacayey mas?uuliyiintii maanta booqanayey degmooyinka iyo xaafadaha magaalada Galkacyo, ayaa in badan ku celceliyey dadweynuhu ciidanka ammaanka in ay gacan ku siiyaan adkaynta nabad-galyada iyo soo qabashada cidkasta oo ku tallaabsata fal-danbiyeed dhan ka ah ammaanka Puntland gaar ahaanna midka magaalada Galkacyo.
Taliyaha qaybta bilsyka ee gobolka Mudug G/le sare Muuse Cabdiraxman (Xasaasi) ayaa isna dadweynha ka codsaday in aysan gabaadsiin cadawgooda taas oo uu ula jeeday dadka gaysta falalka dilka iyo wax qarxinta iskugu jira.
Marka laga gudbo kormeerradaan maanta todobaadkii ugu danbeeyey gudaha magaalada Galkacyo waxaa ka socday hawlgallo aad u ballaaran oo lagu adkaynayey ammaanka magaalada, kadib markii dhawr jeer oo isku xig-xigay magaalada ay ka dhaceen falal amni darro.
Hawlgalladaasi oo ay wadeen ciidamada ammaanku ayaa si siman uga socday dhammaan xaafadaha laga duwan ee magaalada Galkacyo waxaana lagu ugaarsanayey khaqsiyaadka looga shakiyo in ay waxyeelaynayaan ammaanka magaalada Galkacyo.
Intii ay socdeen hawlgalladaan ayaa la soo qabqabtay dhawr qof oo la aaminsan yahay in ay qayb ka yihiin ammaan xumada magaalada kuwaasi oo ay bilesyku ku hayaan baaritaanno lagu hubinayo ku lug-lahaanshahood falal amni darro.
?Issimada Puntland oo baaq nabadeed u diray ardaayada Igdhays/Ufayn.